Morocco: Mohammed VI wuxuu dafiray dabaaldeggii rasmiga ahaa ee dhalashadiisa - JeuneAfrique.com - KU SOO DHAWEYN
ACCUEIL » SIYAASADDA Morocco: Mohammed VI wuxuu dafiray dabaaldega rasmiga ah ee dhalashadiisa - JeuneAfrique.com
Boqorka dalka Morocco, Mohammed VI, oo u dabaaldegaya 56-da 21 bisha Agoosto ee soo socota, wuxuu go’aansaday "inuusan abaabulin, laga bilaabo sannadkan, xafladda rasmiga ah" ee loogu dabaaldegayo dhalashadiisa, ayaa ku dhawaaqay 13 August Agoosto hadal ka soo Baxay qasriga, iyadoo aan la cayimin sababaha go'aankan.
Dabaaldegyada sanadguuradii boqornimada ayaa dhaqan ahaan isku raacay "Dabaaldega Dhallinyarada". Intii lagu jiray xukunka Xasan II, iiddan waxaa loo dabaaldegay dhalashadii aabihii xukumi jiray hadda, Luulyo 8.
Wixii ku saabsan Ciidda Carshigii ugu dambeeyay, kaas oo calaamadeeyay 30 iyo 31 Luulyo sannadihii 20 ee boqornimadii Mohammed VIqasriga ayaa horey ugu yeeray Morooko "xus caadi ah oo aan dabaaldeg kale la sameyn".
Jadwal taariikhi ah oo ay kuxiran yihiin ciidaha rasmiga ah
Fasaxani wuxuu soo afjaray 31 Luulyo iyada oo la xusayo xaflad dhaqameed aad u sareeya, kaas oo sanad walba la arko boqolaal marti sharaf ah, saraakiil la soo doortay iyo saraakiil sarsare oo ka tirsan Wasaaradda Arrimaha Gudaha oo u sujuudaya boqornimadooda ka hor.
Sannadkiisii ​​dhalashadiisa 54e, ee 2017, boqorka wuxuu abaabulay soo dhaweyn magaalada M'diq (woqooyi) iyadoo ay goob joog ahaayeen dad fara badan oo matalaya dunida siyaasadeed, diblomaasiyadeed iyo militari.
Jadwalka taariikhda Moroccan waxaa lagu xusayaa xaflado rasmi ah, oo lagu xusayo taariikho taariikhi ah iyo ballamo la xiriira nolosha boqortooyada, oo badanaa lagu xukumaa soo dhaweyn ballaaran, khudbado iyo sharfid boqornimo.
Cabral Libii waxaa loogu talagalay kuwa doonaya "inay siyaasiyan isaga dilaan"
Inde: Un homme lié au meurtre de Gauri nommé dans le procès-verbal de Kalburgi Inde Nouvelles